Maesai ကအလောင်းမင်းတရား ဦးအောင်ဇေယျ တည်ခဲ့တဲ့ ဘုရား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » Maesai ကအလောင်းမင်းတရား ဦးအောင်ဇေယျ တည်ခဲ့တဲ့ ဘုရား
Maesai ကအလောင်းမင်းတရား ဦးအောင်ဇေယျ တည်ခဲ့တဲ့ ဘုရား
Posted by shwe ni on Jul 28, 2011 in Arts & Humanities, Cultures, History, Photography, Travel | 11 comments
ဒါကတော့အလောင်းမင်းတရား ဦးအောင်ဇေယျ တည်ခဲ့တဲ့ ဘုရား ( ထိုင်းတွေကအပေါ်ငုံ ပီးဖုံးထားလိုက်ပါပီ)
ဒါကတော့အလောင်းမင်းတရား ဦးအောင်ဇေယျ တို့ တိုက်ပွဲ ပန်းချီ
မန်မာဘက် ခြမ်းက လောင်းကစားရုံ
Laos ဘက်မှာတော့ ဘရမ်း စီးကရက် အရက် ဝတ်အထည်အတုတွေရှိတယ် ထိုင်းဘက် ခြမ်းက တော့ ဘုရားမျိုးစုံရှိတယ်
ထိုင်းဘက်ကို တစ်ခါမှမရောက်ဖူးလို့… အဲဒီဘက်က ထူးခြားတာတို့ ထူးဆန်းတာတို့ နောက် နယ်မြေတွေကိုလည်း တင်ပေးစေလိုပါတယ်။
မြေပုံလေးကြည့်ရတော့.. အဲဒီနယ်မှာ.. နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဆုံတဲ့.. ရွေတြိဂံက… ၂နေရာတောင်ရှိတာပဲ..။
သိချင်တာလေးက.. ဦးအောင်ဇေယျကို.. ထိုင်းလူမျိုးတွေ ကိုးကွယ်တာမျိုးရှိတယ်ကြားဖူးတယ်..။
တချို့ထိုင်းမတွေ..ခါးမှချိပ်ထား..လယ်ပင်းမှာဆွဲထားတဲ့ အဆောင်လက်ဖွဲ့ လေးအကြောင်းလဲ..ဆက်စပ်နေရင် ပြောပြပါဥိး..။
အရပ်စကား အရ ယိုးဒယား နယ်စပ် မှာ ဦးအောင်ဇေယျ ရုပ်တု ရှိတဲ့ ရွာလေး တစ်ရွာ ရှိတယ် တဲ့..။ ရွာထဲက ရွာသူရွာသား များ အပြင်းအထန် ဖျားနာခဲ့ပြီ ဆိုရင် ဦးအောင်ဇေယျ ရုပ်တု က တစ်စုံတစ်ခု ကို သွားကိုင်မှ ပျောက်ကင်း ချမ်းသာရာ ရပါသတဲ့ ။ အရပ်စကား ကို ၀င်ပြောပြ ကြည့်တာပါနော် ။
ထိုင်းမတွေ ခါးချိတ်တာတော့ သေချာ မသိဘူး.. ထိုင်းမှာ တက္ကစီ စီးရင် ကားတိုင်းရဲ့ ခေါင်မိုးမှာ ထုံးနဲ့ အင်းဆွဲထားတာ ရှိတယ်။ မကောင်းဆိုးဝါး မကပ်အောင်လား ဒါမှ မဟုတ် ၀င်ငွေ ကောင်းအောင်လား အစောင့်ချတဲ့ သဘောနဲ့ လုပ်ထားတာလားတော့ မသိဘူး။
ကျနော်ေ၇ွှဘိုသား လည်းမသိဘူးဗျ အခုမှသိတယ်ကျေးဇူးပဲနော်
မမ မိုးပွင်.ဖြူ လည်းရွှေဘိုသူဆို ပို.စ်လေးဘာလေး တင်အုံးလေဗျာ
သူများကိုပဲ စွတ်မမန်းနဲ. ခဗျရေးတဲ.ပို.စ်ကိုလည်း မန်းချင်လို.ပါ
သုံးနိုင်ငံဆုံတဲ့နေရာမို့ ရွှေတြိဂံလို့ခေါ်တာ ခုမှသိတော့တယ်
အလောင်းမင်းတရားကို ထိုင်းဘက်က ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတော့ ကျေနပ်အားရစရာကြီးပဲ
ဒီမှာတော့ ခုများကျတော့လည်း သူများကိုးကွယ်နေရသလားလို့
သဂျီးမေးထားတာ ကို ကျမသိတ်မသိပါဘူး History ထဲမှာ အယုဓယ က အလောင်းမင်းတရာ ခေါတ်မှာ ကျရှုံးတာ မဟုတ်ပေမဲ အလောင်းမင်းတရား ကတော့ အယုဓယ ကိုသိမ်း ထိုင်းကို ဖျက်စီး တဲ့ မြန်မာ ဘုရင်တပါး လို့သတ်မှတ်ကျတာ
ပြောလို့တော့ မရဘူး သူတို့ ကိုးကွယ်တဲ့ အထဲမှာ Myanmar ဗေဒင် ဆရာမတ ယောက် လဲရှိတယ် အဲဆရာမ က အရမ်းချမ်းသာပီး မှာ အလှူကြီးပြန်ပေး လို့ Myanmar မှာတောင် ဘွဲ့ထူးတွေရပီးပါပြီ
– အဆောင်တွေ က ဘုန်းကြီးတွေ ပရိတ်ကြိုးတွေ စီမံထားတဲ့ အင်းတွေ ရုတ်ထုလေးတွေ အစုံပါပဲ
– ထိုင်းတွေက ဘုရား ကလွဲပီး တန်ခိုးထတ်တာမှန်သမျကိုးကွယ်ပါတယ် ဘုရားက သေပီးတာကြာပြီ လိုပြောကြတယ် .
ဆွမ်းကပ် ပန်းရေ ချမ်း ကပ်တာ ကအစ ရှိလဲမရှိတောဘဲ အပိုအယ် လုပ်တွေလိုထင်ကျတာ ( ရုဝထ္ထု မကိုးကွယ်တိုင်း လဲ ဘုရား က ရင်ထဲမှာမရှိကျပါဘူး ) သာမှန် တန်ခိုးမထက်ဘူး လို့ ထင်တဲ ဘုရား ရုပ်ထုတွေက လူနေ ခန်းတွေမှာ အလှအပ တန်စာဆင် ထားတာများနေတယ်
– နတ် တို့အောက်လန်း တို့ ကိုတော့ အရမ်း ယုံကြည် ပါတယ် ။ University တိုင်းမှာ နတ်ကွန်းလေး တွေနဲ့ exam နီးရင် အလှူတွေအပြည်
– ထိုင်းကိုးကွယ်တဲ့အထဲမှာ ဘုရင့်နောင်မင်းတရားကြီး လဲပါတယ် သူတို့ကိုမေးကြည့်တော့ တိုက်ပွဲတိုင်းနိုင်ခဲ့လို ပြောပါတယ် ဒါအပြင် ထိုင်းဘုရင် နဒီဆူဝမ် ကိုသားအဖြစ် မွှေးစားခဲ့ တာလဲပါမယ်နဲ့တူပါတယ်
– Myanmar ကိုတော့ ကြောက်တုန်းပဲနဲ့ တူတယ် Maesai မှာ ကင်းရုပ် ကြီးရှိပါတယ် Myanmar အလွယ်တကူဝင်မတိုက်နိုင်အောင်စီမံထားတာလို့ ပြောကျတယ်
အယုဓယ သွားတုန်းက ထိုင်း ဂိုက်မ ကို တော်တော် အမြင်ကတ်တယ်။ မြန်မာ မကောင်းကြောင်းတွေကြီးပဲ.. အခုနေများ မြန်မာ မြင်ရင် ထ ပြီး ဂလဲ့စားချေ ချင်တဲ့ ပုံနဲ့ ပြောနေတာ.. မုန်းစရာကြီး
ကော့သောင်း ဂွတ်ဟုတ်အငူနားက ကုန်းပေါ်မှာ မှာ မြန်မာဘုရင်ရဲ့ ရုပ်တု အမှတ်တရတည်မယ်လုပ်တော့ ပထမ အလောင်းဘုရားရုပ်တုကို စဉ်းစားကြပါတယ်။ နောက်တော့ အလောင်းဘုရား ရုပ်တုတည်ရင် ထိုင်း-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ပြဿနာတက်နိုင်တယ် ဆိုပြီး ဘုရင့်နောင် ရုပ်တုကိုပဲ တည်လိုက်ပါတယ်။ ထိုင်းတွေက ဘုရင့်နောင်ကို သူတို့ ဘုရင်လို့အသိအမှတ်ပြု ချစ်ကြပါတယ်။